တရုတ်နိုင်ငံ ကျိလင်းပြည်နယ်တွင် ဂျင်ဆင်းထုတ်လုပ်မှု တိုးတက် မြင့်မားရန် ဆောင်ရွက် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ ကျိလင်းပြည်နယ်ရှိ ဂျင်ဇင်းစိုက်ခင်းမြင်ကွင်းအားတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
CHANGCHUN ၊ ဇွန် ၁၂ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း ကျိလင်း(Jilin) ပြည်နယ်တွင် ဂျင်ဆင်းထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်မြင့်မားစေရန် လမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ရည်ရွယ်ချက်မှာ လာမည့် ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် ဝင်ငွေစုစုပေါင်း တရုတ်ယွမ် ၈၀ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁.၉ ဘီလီယံ) မှ ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဝင်ငွေ တရုတ်ယွမ် ၁၀၀ ဘီလီယံအထိ မြှင့်တင်သွားရန်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ဂျင်ဆင်းစိုက်ပျိုးခြင်း ၊ တိုးတက်ထုတ်လုပ်ခြင်း ၊ စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်မြှင့်တင်ခြင်း နှင့် ရံပုံငွေရှာဖွေခြင်း ကဲ့သို့သော အဓိက ရှုထောင့်များတွင် ထောက်ပံ့ကူညီဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျိလင်းပြည်နယ် ပြည်သူ့အစိုးရ အထွေထွေရုံး မှ ထုတ်ပြန်သည့် ဂျင်ဆင်းထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ ခေတ်မီ အရည်အသွေးမြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းညွှန်ချက် အရ သိရသည်။
ကျိလင်းပြည်နယ်သည် ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်ပေးရန် ယုံကြည်စိတ်ချရသော နာမည်ကျော် ဆေးဖက်ဝင် အပင်တစ်မျိုးဖြစ်သည့် ဂျင်ဆင်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုကို တရုတ်နိုင်ငံတွင် အဓိက လုပ်ကိုင်သည့် ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ၏ စုစုပေါင်း ဂျင်ဆင်းထုတ်လုပ်မှု ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို ကျိလင်းပြည်နယ်တွင် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်လျက်ရှိကြောင်း စစ်တမ်းအချက်အလက်များတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ လမ်းညွှန်ချက်သည် ကျိလင်းပြည်နယ်၏ ဂျင်ဆင်းထုတ်လုပ်မှုတွင် သိပ္ပံ နှင့် နည်းပညာတီထွင်ဆန်းသစ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ယင်းမှာ ဈေးကွက်တွင် ဂျင်ဆင်းထုတ်လုပ်မှု နှင့် ဂျင်ဆင်းနှီးနွယ်သော ထုတ်ကုန်များ ပိုမိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း ရှိလာလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း Changchun တရုတ်ဆေးဝါး တက္ကသိုလ်မှ ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီး Chen Changbao က ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြည်နယ်အနေဖြင့် အဓိက နည်းပညာများတွင် အောင်မြင်မှုအသစ်များစွမ်းဆောင်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး မျိုးစိတ်အသစ်များ စိုက်ပျိုးခြင်း ၊ ထိရောက်စွာစိုက်ပျိုးခြင်း နှင့် ၁၄ ကြိမ်မြောက် ၅ နှစ်စီမံကိန်း ( ၂၀၂၁ မှ ၂၀၂၅ ) နှစ်များအတွင်း လုပ်ငန်းစဉ်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစေခြင်း တို့ကို ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ထိုသို့ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ် ဂျင်ဆင်းထုတ်လုပ်မှုကို အရည်အသွေးမြင့်မားမှု လမ်းကြောင်းထဲသို့ တွန်းအားပေးဝင်ရောက်သွားစေမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်နယ် စိုက်ပျိုးရေး နှင့် ကျေးလက်ရေးရာဌာန ဒုတိယအကြီးအကဲ Liu Wenguo ကဆိုသည်။
ပြီးခဲ့သော နှစ်တွင် ကျိလင်းပြည်နယ်၏ ဂျင်ဆင်းထုတ်လုပ်မှု စုစုပေါင်းတန်ဖိုးသည် တရုတ်ယွမ်ငွေ ၆၀ ဘီလီယံအထိရှိခဲ့ပြီး နှစ်အလိုက် ၅ ဒသမ ၂ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
China’s Jilin Province to rev up ginseng industry
CHANGCHUN, June 12 (Xinhua) — Northeast China’s Jilin Province has releasedaguideline to bolster the ginseng industry, aiming to increase its total output value to 80 billion yuan (about 11.9 billion U.S. dollars) in 2025 and 100 billion yuan in 2030.
Support measures will be taken in major aspects such as ginseng planting, product development, brand cultivation, and fund seeking, according to the guideline on advancing high-quality development of the ginseng industry released by the general office of the Jilin provincial people’s government.
Jilin is China’s leading production area for ginseng,arenowned herb believed to enhance wellbeing. Statistics showed that the province produces around 60 percent of the country’s total ginseng.
The guideline will enhance the scientific and technological innovation in Jilin’s ginseng industry, which can make the industry and relevant ginseng products more competitive in the market, said Chen Changbao, vice-principal of Changchun University of Chinese Medicine.
Last year, the overall output value of the entire ginseng industrial chain in Jilin surpassed 60 billion yuan, up 5.2 percent year on year
ရုရှား-တရုတ် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပြေးဆွဲမည့် တံတားကြီးကိုစတင်ဖွင့်လှစ်